DEG DEG:Khilaafkii Denni & Karaash oo war cusub kasoo kordhay
May 20, 2020 Mahad Jama 13
GAROWE(P-TIMES)- Wararkii ugu dambeeyey ee aan ka helayno khilaafka u dhaxeeya madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Denni iyo ku xigeenkiisa Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa sheegaya in maan kale loo balamaya xalinta khilaafkooda.
Xubno uu kamid yahay gudoomiyaha Baarlamaanka Abwaan C/rashiid Yuusuf Jibriil iyo waxgaradka Puntland qaarkood oo maalmihii ugu dambeeyey ku hawlanaa xal u helida khilaafka kala dhaxeeya Karaash madaxweyne Denni ayaa kulankoodii hore markii ay ku guul daraysteen waxa ay u balameen galida arintaasi ciidul Fidriga kadib.
Arintani ayaa waxaa sabab u ah dibu dhaceeda labada masuul oo mid walbaaba uu taagan yahay mowqif adag, waxaana dhinacyada dhex dhexaadinaya ay ku guul daraysteen xal u helida khilaafkooda.
Ciida kadib ayaa mar kale ay kulmi doonaan xubnahani si xal loogu helo xiisada Denni iyo Karaash, waxaana weli socda dadaalada xal u raadinta ah ee la wado.
Khilaafka Denni iyo Karaash oo marxalado kala duwan soo maray ayaa sii xoogaysanayey tan iyo markii uu Denni magacaabay taliyaha ciidamada madaxtooyada iyo ku xigeenkiisa oo Axmed Karaash wareegto kaga dareen celiyey kadib markii uu la tashi la’aan ku kacay madaxweynuhu sida uu Axmed Karaash sheegay.
Khilaaf loma bahna cusuub hadi khilaafka si xogysto waxa lagama marmana in belihi dhisty puntland diib usaxan murankan oo oo koxa badan oo cadow umadeed ah dab huriinyaan kuwaso kuxusan inay u adegayaan koxo maskab doona koxo manfacdoona koxo udegaya cadowyo burburinya midmada 6 gobol ee puntland cadoga walaha kumidoby puntland ha egeen kor hana tiirtiiren xoxaha huriinya khilaafkan.
Dhoobo dareed wuxu aha halyayqaran badiida ninba kula day daya daala kabadane kuwa samadiidka ah waymuqdeen maranfoguna waxaynoqonyaan kuwa tilman oo seef unuunka logaguuro.
Aaran jaan iyo deni waa dad madax adag lakiin iyada waxaa layaabah laba taliyah ku xigeen laysku bedeley oo hadanah labaduba u siman yihiin ninka halkaa gaarsiyyey mise wax kala jirah?
Khaniis Eeyduur waanu ku ognahay 5ta magac aad kusoo gashid o waliba mid naageed ku jiro.
Adoo marba qolo aflagaadaynaya si aad isaga hor keentid bulshada Puntland.
Khaniis Eeyduur karti yeelo o hal magac kusoo gal webka adoo si bareer ah u difaacaya waxa aad aaminsan tahay..
Saxafada sida wax ujiraan umasheegto waxa jira waxa bunbuninya wa aran jaan iyo jegaan. Aticsam aslaax manfac iyo maskab.
Waxa kalo wayadan so baxday koxda nabad iyo nolool oo u adega qadar.
Dani laftisa xormaha emarats bu kuntenar ugu xiran yahay.
Siida uu udhaqmayo wa miid daris la ah khalifa haftar ee rer libya ee ismaqiiqay.
Dani iyo karash horay bay ugu fashiilmen khilaafki Dhoobo dareed oo dormugwayn kaqatay dhismaha puntland mudo 11 sano ah .
Siyasaadahan koxaha hardamaya maha kuwo doonya liidnimada Puntland labadan masuul maleh awood ay kububuriyaan umadi iyaga udhiibatay xukunka walaridaya.
Puntland maha makhayaad nin leyahay wa mamul umadi ledahay 1 talabo oo khaldan haday timaado waxay kago antahay barlamanka gafanyasha ah oo kucayilay xaqa umada rayiidka ah.
Xisaabta xigtana waxay noqondoonto.
Waxa fahfahiin doona abdulasiis
REER PUNTLAND DHIB LOOGAMA BAAHNA..
DULBAHANTE WAA IN LA ISKA ERYAA..
DHULBAHANTANA DHIB MOOYEE… NAFAC MA LAHA..
LET PUNTLAND GET FREE OF THE FUCKEN DHULBSHANTEE..
ku dar Warsangeli
Kkkkk idoor wagaash iyo kufriga wacad ala uyaale wanimanwala tan iyo waga akhiiro.
BARAWANI IYO SEED WAXAD KUHADLYSAN WA DICIIFNIMO GURIGA MUSE BORASH BAD JOOGTAN WANA OGNAHAY QABILADA CAYAYSAN IYO KUWA ISKA DHIGAYSAN MATIHIIDINE WARABADANE ORDAYA KALABYADA HARGAYSA SO XIIRA XORNIMO DAROOD BA IDIIN HAYE RER NALAYAAL BATIHIIN JIGJIGO ILA CERIGABO.
Waxaan ahay ishaq, Barawani wa reer puntland, run buu sheegay. Dhalbhante iyo Warsaangli waddankodu waa Somaliland maaha puntland. Puntland diyaar uma ahan inay idin aqbasho
Hirdanka siyaasadeed awooda marka isku sheegto, madax salaax & tol baan nahay kuma jirto . xalku waxa uu noqon doonaa ninka roon reerka ha u hadho ka kalena boorsoonkiisa ha xidh xidho oo ha iska tago..dhex dhexaadin iyo bax ba baxaadin waa sheeko khiyaali ah.
Ciyaaaaal… kursiga madaxnimmadu waa sida naag qurux badan oo kale naagna 2 nin ma wada qabi karto macquulna ma aha , waa mid meesha ka baxaa. markaa sheekadan dhex dhexaadinta waa wax aan meeshaba qaban. ma waxay u jeedaan naagta wada wasa oo ku heshiiya .. Nidaamka dawliga ah iyo Awooda siyaasiga ah sidaa uma shaqayso waaa in 2dooda mid meesha ka baxo haduu doono ha toogto ka kale.
War arintA dani Iyo karaash bal nooga waran
Saeed ba halkan kahadlya ad somaliland.
ADIGA ARANJANA OO kuhaboon inaad unqoto khadam.
Rer garowe haday wanaag kushaqeyaana wanaag.
Balagula dhaqmaya haday dhaqanki dabanirig oo tugnimada aha layimaadan waduminayna garowe dagaalku wu dhexmaraya 2 xuluufo oo afkanool iyo aranjan oo dhinaca iyo ciidanka xulufada Sanaag iyo sool .buhoodle.
Daniina qardhu u cararaya.
Anigu waxaa qabaa in arrintaa la xaliyo waxba ma soo kordhinayso mid la eryo iyo mid la keeno waxaa qabaa in dastuurka lugu kale baxo puntland waa la wada Lee yahay oo waa la wada dhistay puntland ha la badbaasho.